ADF: Wax ka ogow kooxda laf dhuun gashay ku noqotay Uganda - Bulsho News
Qabuuro ku yaala Muqdisho oo lagu aasay Agaasimihii Radio Muqdisho...
ADF: Wax ka ogow kooxda laf dhuun gashay ku noqotay Uganda
29 Daqiiqadood ka hor
ADF iyo IS ayaa waxa ay weerraro joogta ah ka gaysanayeen Beni tan iyo bishii Maarso 2020
Bariga waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo ayaa muddaba waxa ay aheyd meel ay dhaqdhaqaaq xooggan ku leeyihiin kooxaha fallaagada ah, iyagoo colaadda u dhoofiyay dalalka dariska ah sida Rwanda, Burundi iyo Uganda.
Ururkan Allied Democratic Forces (ADF) waxa uu ka mid yahay kooxaha caanka ah ee ka howlgala dalkaasi.
Ururkan Islaamiga ah ayaa waxaa la sameeyay 1990-yadii waxa uuna ku lug lahaa dagaalo lala galay dowladda Uganda. Hasayeeshee markii ururkaasi uu ka soo muuqday waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo, ayaa waxa ay samaysteen garab jihaadi ah oo lagu eedeeyay inuu qaaday weerraro uu ku fulinayo magaca Ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah.
Dadkii ka dambeeyay weerrarkii ismiidaaminta ahaa ee isbuucii hore lagu qaaday caasimadda waddanka Uganda ee Kampala, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof oo ay ku jiraan saddex qof oo isqarxisay ayna ku dhaawacmeen 30 qof oo kale.
Saraakiisha Uganda ayaa weerrarkaasi ku eedeeyay ururka Allied Democratic Forces (ADF), kooxdaas oo 2019-kii sheegtay inay ka tirsan tahay Ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah.
Sidey ADF ku soo bilaabatay?
ADF waxaa waqooyiga Uganda ku aasaasay saraakiil hore oo ka tirsaneyd milateriga oo daacad u aheyd madaxweynihii hore ee Uganda Idi Amiin. Waxa ay hubka u qaateen inay la dagaallamaan madaxweynaha mudada dheer xilka hayay ee Yoweri Museveni iyagoo ku andacooday in dowladdu ay iska cadaadinayso Muslimiinta.
Waa muuqaal ay soo bandhigeen maleeshiyaadka IS kaddib weerrar ay ku qaadeen tuulada Ituri
Kaddib markii milateriga Uganda uu ururkaasi ka adkaaday 2001 ayaa waxa ay u guureen oo ay saldhig ka dhigteen gobolka North Kivu ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo.
Kaddib muddo aanay wax badan qaban ayaa ADF waxa ay dib u soo shaacbaxday 2014 markaas oo ay weerraro xiriir ah ku qaadeen dad rayid ah oo ku nool ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo.
Musa Seka Baluku ayaa noqday hogaamiyaha ururkaasi 2015-kii kaddib markii la xiray ninkii isaga xilka kaga horreeyay ee Jamil Mukulu. Baluku ayaa markii ugu horraysay 2016-kii ku dhawaaqay inuu raacayo awaamiirta ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah.
Hasayeeshee illaa bishii Abriil ee 2019 ayey qaadatay in IS ay qirto inay deegaankaas kala shaqeyso kooxdaasi, markaas oo ay sheegatay mas’uuliyadda weerrar lagu qaaday xeryo milateri oo u dhaw xadka waddanka Uganda.
Bayaankaas waxaa ku dhawaaqay Daacishta Gobolka Bartamaha Afrika, kaas oo ay xitaa ku jiraan kuwa ka dagaallama waddanka Mozambique.
Walow ay jiraan astaamo muujinaya in IS ay xulafo la tahay ADF, ayaanay haddana Daacish baahin wararka borobagaandada ah ee ururkaasi.
Bishii Sibteembar 2020-kii Baluku ayaa waxa uu ku andacooday in ADF aanay ahaynba koox dhisan oo shaqaynaysa.
“Waqtigan la joogo waxaannu ku sugannahay gobol ku yaal bartamaha Afrika, gobolkaas oo ka mid ah gobollada ay ka tirsan yihiin ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah,” ayuu yiri.
Waa sidee xaaladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo?
Sida ay sheegtay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga, ee UNHCR, ADF waxay dileen boqolaal rayid ah waxyna ka barakicyeen in ka badan 40,000 oo qof deegaanka Beni tan iyo bishii January 2021.
Kooxdan ayaa sidoo waxay bartilmaameedsadaan xoogagga dowladda iyo kuwa Qaramada Midoobay.
Tan iyo soo ifibixii kooxdan xiriirka la leh Daacish waxaa sare u kacay weerarada ka dhaca Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo ee ay kooxdani ku lug leedahay.
Mid ka mid ah weeraradii u darnaa ee kooxda waxay ahayd weerar ay ku qaaden xabsi ku yaalla Beni sanadkii la soo dhaafay tasoo horseeday inay xabsiga ka baxsadaan 1,000 oo qof.
Cabsida collaad diin ku saleysan
Collaadda bariga DRC waxay horseeday xasilooni darro diin ku saleysan balse ku luglahaanshaha kooxda Daacish ayaa laga yaabaa inay arrinta uga sii darto. Inta badan dadka DRC waxay aamisan yihiin madhabta Katooliga ee Masiixiga. Muslimiinta ayaa ah 10% dadweynaha dalkaasi.
Qaar ka mid ah Muslimiinta Beni ayaa diidan ADF, balse waxay horseday in kooxdu ay dleen laba shekh o caan ka ahaa halkaasi.
Qaar ka mid ah muuqaallada ay soo saaretay kooxda Daacish ee ku saabsan DRC
Maki: Waa kuma heesaaga iyo Majaajilaystaha mu’adanka ah?
Xog: BEESHA CAALAMKA oo soo faro-gelisay xiisadda Galmudug...
Qalalaasaha Tigray: Dagaalkii faraha looga gubtay ee ka...
Act early on rising UK Covid cases or...